Saddex arin oo doorashadda HirShabeelle uga duwan tahay kuwa Maamuladda kale | KEYDMEDIA ONLINE
Saddex arin oo doorashadda HirShabeelle uga duwan tahay kuwa Maamuladda kale
Hanaanka loo galay doorashadda ee kuraasta loo furay dhamaan Muxaafid iyo Mucaarad waa mid amaan badan loo jeediyay.
JOWHAR, Soomaaliya - Labadii maalmood ee lasoo dhaafay indhuhu waxay kusii jeedeen Jowhar, oo ka socoto doorashadda Aqalka Sare, taasoo lagu soo dooranayo 8 kursi.
Hanaanka loo galay doorashadda ee kuraasta loo furay dhamaan Muxaafid iyo Mucaarad waa mid amaan badan loogu jeediyay Madaxweyne Guudlaawe, oo eeda ka fogaadey.
Laakiin, waxaa jira saddex arrimood oo doorashadda HirShabeelle uga duwan tahay kuwa Maamullada kale, waxanya kala yihiin tartan furan iyo laaluush bixin/cod iibsi.
Tartanka waa mid adag, ma jirto waxa la yiraahdo malxiis, oo meelaha kale ka jirtay, Musharx kasta wuxuu la tartamayaa kuwa kula qoran kursiga, waxayna ku kaa baxayaan sanduuqa, iyadoo lagu kala adkaado hal ama labo wareeg.
Waxaa ugu adkaa tartanka inta la arkay labada kursi ee ay ku guuleysteen Muuse Suudi oo Musharixiin Miisaan leh uga adkaadey iyo midkii shalay Dr Dufle kusoo baxay, oo Tarsan kula jiray tartanka.
Arinta 3aad ayaa ah in doorashadda HirShabeelle looga adkaadey Musharixiintii Villa Somalia, ee uu watey Farmaajo, kuwaasoo ay kamid ahaayeen C/llaahi Sheekh Xasan oo lala rabey inuu meesha ka saaro Muuse Suudi iyo Tarsan oo loo qorsheeyay kursiga Dr Dufle.
Laaluush bixin iyo cod iibsi ayaa ka jira Jowhar, iyadoo la sheegay in Kursiga Muuse Suudi ay ku baxday lacag ku dhaw hal milyan oo dollar, taasoo ka dhigan inuu yahay kursiga ugu qiimaha badan kuraasta Aqalka Sare.
Illaa hadda HirShabeelle doorashadeeda way sii socotaa, waxayna Xildhibaanada Maanta oo Khamiis ah dooranayaan kuraas cusub, waxaana jira gaabis iyo caqabado badan, sida gudiga doorashadda uu sheegay.
0 Comments Topics: doorashadda hirshabeelle soomaaliya